Izindlela zokupheka ezingama-30 zezingane - Ukudla
Izindlela zokupheka ezingama-30 Ezinomsoco Ongazenza Kusuka Kokunye Okukufaka ku-Pantry Yakho
30 Kid Friendly Recipes You Can Make From Ingredients Your Pantry
Njengokungathi akwanele ukuthi uze nohlelo lokudla olususelwa ekheni likabhontshisi elifihle ngemuva kwephenti lakho, uphinde uphekele ukugxeka kokudla okuthembekile emhlabeni: ingane yakho. Akunankathazo, mngani. Kuvela ukuthi ukupheka kusuka endaweni yakho yokuphekela futhi ukuphekela izingane zakho kunokuthile okufanayo: ukuguquguquka. Uma udinga ukushintshanisa isithako ngoba awunaso (noma ingane yakho siyakuzonda), amandla amaningi kuwe. Lapha, izidlo ezingama-30 ezilungele izingane ongazenza nalokho osunayo.
OKUSHIWO: Ama-50 Chicken Recipes Wezingane Abazothanda Ngempela
1. Ibhodwe Elilodwa, iPasta engu-15 kalamula
Ngokuqinisekile akunjalo ubuhlungu ukuthi le pasta yolamula isuka epanini iye etafuleni ngemizuzu engu-15. Ngamaphoyinti ansundu, ungavumela ingane yakho ukuthi ikhethe ukwakheka kwe-noodle. (Noma yiluphi uhlobo luzosebenza.)
2. I-Bacon ne-Rice Ethosiwe Ilayisi
Uzothanda ukusebenzisa irayisi elisele, bayothanda izingcezwana ezihlwabusayo zebhekoni kanye nososo onosawoti. (Uma nonke niphume emaqandeni, yeqa ’em.)
izinwele ezifanele ubuso obusaqanda
Uma ufulawa, ushizi kanye nekani likatamatisi, unezinto zokwenziwa kwedina lokugcina elijabulisa izingane. Noma yikuphi ukufakwa (noma akukho toppings) okuzokwenza.
4. Inkukhu Tinga Tacos
Le ithembele enkukhwini ye-rotisserie elula kakhulu, kepha noma iyiphi inkukhu eshisiwe esetshenzisiwe ingayifaka esikhundleni sayo. Setha ama-toppings ngobusuku be-taco obakhelayo futhi wonke umuntu angakhetha izintandokazi zakhe.
5. I-One-Pan Spaghetti nama-Meatballs
Kuyinto yakudala ngesizathu, akunjalo? Sebenzisa i-jarred marinara sauce bese umba leyo nyama yenkomo ngemuva kwefriji yakho — isidlo sakusihlwa ngemizuzu engama-30.
6. I-10-Minute Macaroni noshizi emgodini
Kubukeka kufana nezinto ezivela ebhokisini eliluhlaza okwesibhakabhaka, kepha kunambitheka kangcono kakhulu.
UTeri Lyn Fisher / Yidla Njengokuthi Unikeze Imfoloko
7. Amazambane Amnandi Agcwele Nge-Chipotle-Lime Yogurt
Indlela eqinisekile yokwenza izingane zakho zidle lezo zinto ezimnyama ukuzibhangqa neminye imifino ethandwa kakhulu. Okuhle kunakho konke, amazambane agxotshiwe angaguqulwa nakho konke kusuka kummbila ofriziwe kuya ku-broccoli kuye ekugqokeni kwepulazi.
8. Inkukhu ne-Snap Pea Stir-Fry
I-Stry-fries ingomunye umbono wesidlo sakusihlwa ohlukahlukene (futhi osheshayo!). O, ingane yakho izonda upelepele wensimbi? Akunankinga enkulu, zithengisele enye i-veggie emnandi futhi emnandi, njengezinqathe.
9. Ukholifulawa Ama-Potato Burgers
Akukho okuphikisana nama-burger ajwayelekile, kepha zombili ukholifulawa namazambane agcina isikhathi eside kunenyama yomhlabathi. Futhi, kuyindlela elula yokuthola umsoco owengeziwe ekudleni kwawo wonke umuntu.
Lokhu kufana ne-mac enhle noshizi, enezithako eziyisithupha nje zokuqalisa. (Isibalo siphansi kakhulu uma ushiya izingcezwana, aka pepper emnyama.)
11. Ama-Potato Hash Browns Amnandi Enziwe Nge-Waffle-Iron
Ukudla kwasekuseni esidlweni sakusihlwa kuwina okulula, futhi bazoshaywa ngumoya ngokuthi wenze i-hash browns ngensimbi e-waffle.
12. I-Cheesy Kale Farfalle Pasta
O, izingane zakho zizonda i-kale? Sebenzisa isipinashi. Bayakuzonda lokho, nabo? Zama i-broccoli. Lokhu esikushoyo ukuthi, isibhakabhaka umkhawulo.
Intengo kaColin / ama-Peas amabili kanye ne-Pod Cookbook yabo
13. I-Honey Mustard Sheet-Pan Inkukhu enamahlumela eBrussels
Konke kumayelana nesosi lwesinaphi esimnandi futhi esimnandi. Konke okunye kungashintsheka ngokuphelele: amabele ngamathanga, ubhontshisi oluhlaza wamahlumela eBrussels, uthola umbono.
14. I-Slow Cooker Ingulube Carnitas
Ukusikeka okungabizi kwenyama-njengehlombe lengulube-kungumngane omkhulu wompheki we-pantry. Futhi uma uyifaka ku-taco, uzowina wonke umndeni ngesikhathi sedina.
15. Isaladi le-Avocado ne-Black Bean Pasta
Cabanga ngesaladi le-pasta njengesilayidi esingenalutho sezithako ze-pantry. Ungaya endle nganoma iyiphi imifino, ubhontshisi kanye namaprotheni onawo.
16. Ummbila Obabayo I-Carbonara
Unamaqanda efrijini lakho, akunjalo? Ususondele egiyeni elilodwa likakhilimu, elijabulisa izingane. (Hamba kalula kuma-flakes abomvu abomvu, kunjalo.)
17. Isobho lomshado wase-Italy lika-Cheater
Uma umcabango wakho wokuqala uthi, ingane yami ayisoze yakudla lokho , Cabanga futhi. Empeleni akuyona nje into eyisisekelo sesobho lenkukhu (izaqathe, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, u-anyanisi, ama-noodle, umhluzi) ngama-meatballs esoseji esikhundleni salokho. Ungashiya i-kale ngaphandle noma uyishintshe ibe isipinashi uma ungathanda.
Izincwadi zikaSarah Copeland / Chronicle
18. AmaJohnnycakes aneRhubarb namaSherries Omuncu
Kukholwe noma ungakukholwa, mhlawumbe usenakho ukwakheka kwenqwaba yama-pancake ku-pantry yakho. Bakhonze nganoma yisiphi isithelo nesiraphu eningi ye-maple.
19. Ama-Waffles Woshizi Olondolozayo
Lawa ma-waffles enziwa nge-cheddar, kepha noma yimuphi ushizi uzosebenza-ngisho nohlobo olushiziwe ngaphambili.
20. Amapancake e-Cinnamon-Roll
KULUNGILE, ngeke ikunqobele noma imiphi imiklomelo yemifino eluhlaza. Kepha uma uzama ukuwina umklomelo womzali wonyaka, ngakolunye uhlangothi…
ama-movie we-hindi ku-amazon prime india
21. I-Slow-Cooker Isobho Senyama Yenkukhu
Ngeke nje ungahambi kahle ngesobho le-chicken noodle. Sikwenze kwaba lula kakhulu ngokuzivumelanisa nokupheka okuhamba kancane.
22. I-White Turkey Chili ne-Avocado
Uma i-chili ejwayelekile nayo exotic yezingane zakho, zama upelepele omhlophe. Kulula nje ukwenza ngeziqobosho ezisemathinini, kepha kumnene ngokwengeziwe ngamafudlana amancane okunambitha.
23. Isobho le-Chicken Gnocchi
Inkukhu isobho, hlangana namazambane amazambane. Akukho okungafanele uthande ngemicamelo ye-pasta enenhlama.
24. Ubhatata Obimnandi namaTacos Amabhontshisi Amnyama ane-Blue Cheese Crema
Bamba isosi yokudipha, ngaphandle uma ubusiswe ngezingane ezizodla ushizi oluhlaza okwesibhakabhaka.
25. Isobho Lamatamatisi Elilunywe Ushizi
Ikani likatamatisi ophelele nezinye izinkukhu ezithengwa esitolo zizokuyisa kude. Awunayo unayo ukukuphaka ngezimbiza zamasoni amancane, kepha kuqinisekile ukuthi kuhle.
Inspired Entertainment / The Domestic Geek’s Meals Made Easy
26. Inkukhu Eyodwa Enamakhekhe U-Alfredo
Kule iresiphi yemizuzu engama-35, konke kuhlangana embizeni eyodwa. Ibhonasi: Ungasebenzisa noma yiluphi uhlobo lobisi noma ukhilimu onalo olutholakala efrijini.
27. I-Easy One-Pan Baked Ziti
Ngekhanda le fomula: i-pasta + utamatisi osemathinini + ushizi = izindawo ezibhakiwe. Konke okunye kungakhethwa.
28. Ukholifulawa othosiwe iMacaroni noshizi
Ukholifulawa ubambelela kahle efrijini, ngakho-ke kuyisinqumo esihle kakhulu lapho ungagijimeli esitolo ngaso sonke isikhathi. Iphinde ihlangane ngokukhululekile kuma-mac noshizi. (Just sayin ').
29. I-Garlic Isinkwa Esiwosiwe Senkukhu
Uma ungenasiqiniseko sokuthi wenzeni ngenkukhu obukade uyibuthile efrijini lakho, yigcobe ngocezwana besinkwa bese uyibuka inyamalala.
izimo eziphambili ze-yoga namagama
30. I-Falafel Patties
Indlela enobungane yokuphaka amantshontsho? Bahlanganise nanoma yimaphi amakhambi noma imifino onayo bese uwaguqula abe yi-falafel. Vele ubatshele ukuthi bangumzala opholile wezinkukhu zezinkukhu.
OKUSHIWO: Ama-Dinner angama-Kid-Friendly Ongawenza Ngemizuzu Engu-20 Noma Ngaphansi
amabhayisikobho amahle kakhulu we-netflix
ukuzivocavoca ukuze unciphise umlomo wesibeletho ngokushesha
izinwele zigundwe izintokazi
ukuvivinya isisu ukunciphisa isisu
usuku lokuqala lwezingcaphuno zesikole zezingane
izitsha eziseceleni ze-pasta